Semalt: Fampidinana ny tranokala miaraka amin'ny fanitarana
Ho an'ny vao haingana, ny teknolojia raitra dia mifantoka indrindra amin'ny famindrana angon-drakitra tsy voaaro sy semi-strukture ao amin'ny tranonkala sy tranonkala ho an'ny angon-drakitra voarakitra izay voatahiry ao amin'ny Excel spreadsheets sy databases. Amin'izao andro izao dia ny asa an-tsela-tena ataonao dia manolo-tena, noho ny Google. Amin'ny fampivoarana ny tranokala, ny fanalana ny tranonkala dia sombiny kely fotsiny.
Ny antonta tsy voaaro dia hita amin'ny format HTML. Raha te haka ny angona avy amin'ny tranokalan'ny endrika tsotra ianao dia tsy maintsy manao fanariam-pako. Raha ny kodia dia tsy ny tombotsoanao, ny tanjon'ny tranokala amin'ny tranokala dia ny mikarakara ny filàn'ny tranonkalanao.
Ny vidin-tsolika amin'ny Internet
Ny fampivoarana ny tranokala dia mamoaka vaovao mahasoa avy amin'ny fivarotana an-tserasera toy ny sary, vidin'ny vokatra, ary ny famaritana. Ny fampahalalana dia ampiasain'ny tompon'ny e-business ho fampitahana ny vidin'ny vidiny sy ny fanadihadiana. Ny fampihenana ny fako dia ampiasaina amin'ny fandefasana an-tserasera. Amin'ny fampivelarana ny tranokala, dia afaka mamoaka mora foana ny sary sy ny vokatra avy amin'ny tranonkala maro ary manangona ny angon-drakitra ao amin'ny datasheets ho an'ny fanadihadiana.
Manamafy ny famerenana an-tserasera
Amin'io karazana tahirin-kevitra eo amin'ny taratasy misy anao Excel io dia azonao atao ny manapa-kevitra amin'ny sehatra tokony hisy fiantraikany amin'ny fampitomboana ny mombamomba anao.
Ny fanovana ny tranokalam-baovao dia miova mandritra ny alina. Ilaina ny manamarika ny fanovan'ny layout amin'ny fotoana mahomby ary mampihatra paikady mahomby.
Nahoana no tranokala
Web Web Ny mpangalatra dia ampaha-laharana ambony wser plugin izay manolotra tolotra fanangonana data sy ny extension Google Chrome. Ny data entina amin'ny Web Scraper dia nakarina amin'ny endrika CSV ary voatahiry ao amin'ny CouchDB. Ny asa fanasivanana tranonkala toy ny fanangonana rakitra, fanondranana, ary tranokala fitahirizana dia atao ao anatin'ny tranokala Chrome.
Inona ny fanivanana tranokala vohikala?
Ny Web Scraper dia plugin na fanitarana izay omena maimaim-poana ao amin'ny tranokala Google ao amin'ny Google. Amin'ny alalan'ity fanitarana ity, azonao atao ny manaisotra ireo angon-drakitra mahasoa avy amin'ny pejin'ny pejy avo lenta. Ny data azo alaina amin'ny fampiasana tranokala amin'ny tranokala dia azo tahirizina ho tahiry CSV na ao amin'ny CouchDB. Ity fanitarana ity dia miasa ao anaty sitemap iray avy amin'ny teny go. Amin'ny maha-mpampiasa azy dia afaka manapa-kevitra ny amin'izay tokony hakana azy sy ny zavatra hialana.
Mametraka tranokala ao amin'ny Google ary mametraka ny extension amin'ny Chrome. Avelao ny fananganana tranokala ho an'ny tranokala ho fanasitranana ho anao. Ity plugin ity dia mamoaka sy mamoaka ny angon-drakitra araka ny sitemap fananganana amin'ny endriny mpampiasa Source .